ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေ ပြနေသလဲ(ရုပ်သံ) – DVB
ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေ ပြနေသလဲ(ရုပ်သံ)
အပတ်စဉ် ပုံမှန်တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့်၊ ရုံတင်ပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား Sci-fi Drama အမျိုးအစား ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် - Little Joe !
ထူးထူးခြားခြား Sci-fi Drama အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် Little Joe ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီးတော့ ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ ဩစတီးယန်းအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Jessica Hausner က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Magnolia Pictures နဲ့ Magnet Releasing တို့က ဖြန့်ချိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပင်မျိုးဗီဇပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Alice ဟာ Single Mother တယောက် ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Joe နဲ့အတူ နေထိုင်ပါတယ်။ Alice တို့ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပရောဂျက်မှာတော့ အပင်မျိုးစိတ်သစ်တခုကို ဖန်တီးနေကြပြီး ဒါက လူသားတွေကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်သလို ဆေးပညာကုထုံးတွေမှာပါ အသုံးတည့်စေနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ သူက ပေါ်လစီကို ချိုးဖောက်ပြီး အဲဒီအပင်တွေထဲက တပင်ကို သူ့သား လေး Joe အတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ယူလာခဲ့ချိန်မှာတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ ဒီအပင်က တကယ်ရော အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား၊ ဘယ်လို မျှော်လင့်မထားတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒီကားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာတော့ ဗြိတိန် သရုပ်ဆောင် မင်းသား မင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Emily Beecham ၊ Ben Whishaw တို့နဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Kerry Fox ၊ Kit Connor ၊ David Wilmot စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြတာပါ။ ကြာမြင့်ချိန် ၁၀၅ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ Not Rated-NR အဆင့် သတ်မှတ်ထားပြီး IMDb မှာတော့ Rating 6.1 ရရှိထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ Cannes Film Festival မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလကတည်းက ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Emily Beecham က အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ခရစ္စမတ်ရာသီအမီ ကြည့်ရှုကြရမယ့် ဟောလိဝုဒ်အချစ်ဒရာမာဇာတ်မြူးရုပ်ရှင် - Last Christmas !
ဒီကားကိုတော့ Universal Pictures ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Spy, Ghostbusters, A Simple Favor စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Paul Feig က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာပါ။ ဒီကားထဲမှာတော့ Kate ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ Tom ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတို့ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ခရစ္စမတ်ရာသီအခင်းအကျင်းတွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားခဲ့တာပါ။
Kate ဟာ Elf ဝတ်စုံနဲ့ ခရစ္စမတ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး အရာရာ လွဲချော်မှုတွေနဲ့ ကံမကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ပါ။ အဲဒီလို မပျော်ရွှင်ရမှုတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေနဲ့ လန်ဒန်မြို့ပေါ်မှာ လျှောက်သွားနေချိန်မှာပဲ Tom နဲ့ အမှတ်မထင်ဆုံချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဘဝဟာ တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကြားက သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းက အဆုံးသတ်လှပနိုင်ပါ့မလား၊ ဘယ်လိုအချိုးအကွေ့၊ အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာတော့ Crazy Rich Asians ရုပ်ရှင်နဲ့ နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ ဟောလိ ဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Henry Golding ၊ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုတွေ ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Emilia Clarke တို့နဲ့အတူ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကြီး ၂ ဦးဖြစ်ကြတဲ့ Michelle Yeoh နဲ့ Emma Thompson တို့ကလည်း ပါဝင်ထားကြတာပါ။ ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေဟာ အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့ မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ အကုန်အကျခံရိုက် ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာမြင့်ချိန် ၁၀၂ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်၊ တေးရေးဆရာတ ဦးဖြစ်တဲ့ George Michael ရဲ့ Last Christmas သီချင်းအပါအဝင် လုံးဝမထုတ်ရသေးတဲ့ သီချင်းအသစ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ထပ် ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ လူငယ်သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထိုက်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့ ပါဝင်တဲ့ Comedy Horror အမျိုးအစား မြန်မာရုပ်ရှင် - သန်းခေါင်ယံ !
လူငယ်မျက်နှာသစ် သရုပ်ဆောင်မင်းသား အောင်ရဲထိုက်နဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့ ပါဝင်တဲ့ Comedy Horror အမျိုးအစား မြန်မာရုပ်ရှင်ကား-သန်းခေါင်ယံကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ Watermarks Studios ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက် တာဖြစ်ပြီး ကိုဆန်းရဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းကို လူငယ်ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ်က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ညရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပရိသတ်တွေ သိကြတဲ့ လူငယ်သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထိုက်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့နဲ့အတူ အဆိုတော် ကြက်ဖ၊ စိုင်းဝဏ္ဏအောင်၊ အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာနဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး စိုးမြတ်သူဇာတို့က ခေါင်း ဆောင်ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေရော၊ ဟာသဒရာမာဇာတ်လမ်းဇာတ် ကွက်တွေကိုပါ တပြိုင်တည်း ခံစားကြရမယ့် ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ သန်းခေါင်ယံလို့ အမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ဘယ်လိုထူးထူးခြားခြား ဖန်တီးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာပဲ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန် မြို့၊ Junction City ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ဒရာမာ ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ အနမ်းဝိုင်ရုပ်ရှင်နဲ့ ပရိသတ်လက်ခံအား မှုရရှိခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာအောင်မြတ်ရဲ့ ခုတခါ Comedy Horror ပုံစံ ဖန်တီးတင်ဆက်မှု ကရော ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်း ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ ၂ သိန်းကျော် ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုရှင်မင်းသား Eddie Redmayne နဲ့ မင်းသမီး Felicity Jones တို့ အတွဲညီညီပါဝင်ထားကြတဲ့ စွန့်စားမှုအသားပေး အထုပတ္တိအက်ရှင်ဒရာမာရုပ်ရှင် The Aeronauts !
စွန့်စားမှုအသားပေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ အက်ရှင်ဒရာမာ အမျိုးအစားရုပ်ရှင် ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် – The Aeronauts ကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ War and Peace ရုပ်သံဇာတ်လမ်းနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဗြိတိန်ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ Tom Harper က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး Mandeville Films နဲ့ FilmNation Entertainment ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ၂ ခုပူးပေါင်း တင်ဆက်လိုက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုအပါအဝင် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုတွေ အများကြီးရရှိထားတဲ့ The Theory of Everything ၊ The Danish Girl စတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ထင် ရှားတဲ့ ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Eddie Redmayne နဲ့ Like Crazy ရုပ်ရှင်နဲ့ လူ သိများပြီး The Theory of Everything မှာ မင်းသား Redmayne နဲ့ အတူတွဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Felicity Jones တို့က အတွဲညီညီ ခေါင်းဆောင်ပါ ဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ ဒီကားထဲမှာတော့ Jones က မိုးပျံပူဖောင်းမောင်းနှင်ပျံသန်းမယ့် Amelia Wren အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပြီး Redmayne ကတော့ သိပ္ပံပညာရှင် James Glaisher အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပါ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်သူတဦးတယောက်မှ မရောက်ရှိနိုင်သေးတဲ့ ကောင်းကင်ယံ အမြင့်တခုအထိ မီးပုံးပျံစီး ပျံသန်းခဲ့ကြပြီး အံ့အားသင့်စရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကောင်းကင်လေထု အမြင့်တနေရာ ရောက်လာချိန်မှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီး လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားကြတာတွေကို စွန့်စားမှုအသားပေး ဘယ်လို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်း ပြကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေဖြစ်တဲ့ Telluride Film Festival နဲ့ Toronto International Film Festival တွေမှာ ကနဦးပြသခဲ့ပြီး ချီးကျူးမှုတွေလည်း ရရှိထားခဲ့တာပါ။ ကြာမြင့်ချိန် မိနစ် ၁၀၀ ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဒီကားကို ဘတ်ဂျတ် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ အကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး IMDb မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင် ဟာ Rating 6.7 အထိ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတကား ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပေးချင်တဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကတော့ ခန့်စည်သူ၊ မြင့်မြတ်၊ ပက်ထရစ်ရှာ၊ ရွှေသမီးတို့ ပါဝင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မြန်မာဟာသရုပ်ရှင် - တောက်ချလိုက်မယ် !
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မြန်မာအချစ်ဟာသရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ တောက်ချလိုက်မယ် ကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ Love2ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဟာသ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို7Day နဲ့ ရာ ဇဝင်ကိုတို့က ဇာတ်ညွှန်းခွဲထားပေးပြီး ခင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ခန့်စည်သူ၊ မြင့်မြတ်၊ ပက်ထရစ်ရှာ၊ ရွှေသမီးတို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြပြီး ခင်လှိုင်၊ ဒိန်းဒေါင်ဟာသညီ နောင်နဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေလည်း အများကြီး ပါဝင်ထားကြတာပါ။
တောက်ချလိုက်မယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဘယ်သူတွေက အကွက်တွေ ရွှေ့ပြီး တောက်ချကြမလဲ၊ ဘယ်လိုအကျော်အခွ၊ ကမောက်ကမဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် တွေနဲ့ ဖန်တီးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာပဲ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန် မြို့၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ ၄ သန်းကျော် ရှိနေပါတယ်။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇း၄၅ နာရီ၊ ၉း၁၅ နာရီတွေမှာ DVB TV channel ကနေ ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး မကြည့်ရှုလိုက်ရသူတွေအတွက် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉း၁၅ နာရီ၊ နေ့လယ် ၁၂း၄၅ နာရီ၊ ၃း၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂း၄၅ နာရီ၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁း၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်္လာနေ့မနက် ၉း၄၅ နာရီတို့မှာ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ Movie Crazy တွေအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေအကြောင်းကို ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး Movie Crazy - DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်လည်း Like, Share နဲ့ Comment တွေပေးပြီး တော့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။
Movie Crazy - DVBရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုး